Redmi K20 ga-enwe akara ngosi akara mkpịsị aka dị elu | Gam akporosis
Redmi si flagship ekwentị, na K20, ga-eme ka ọchịchị na May 28, dị ka anyị mere ka ọ mara. Tupu nke ahụ emee, onye nrụpụta ekpugherela ọtụtụ atụmatụ na nkọwa ya n'oge gara aga.
Ugbu a, na ohere ọhụụ a, a ọhụrụ teaser nke ngwaọrụ ekpughela ihe banyere ihuenyo ya, na ọ bụ onye na-agụ akara mkpịsị aka na ọ ga-ebu onwe ya, nke ga-aka karịa nke ugbu a.
Ekwentị flagship Xiaomi Mi 9, nke ekwuputara na February, bụ nke nwere usoro nyocha akara mkpịsị aka nke ise. Ekwentị ndị ọzọ Redmi K20 na K20 Pro, ụdị nke vitaminized nke mbụ ga-ada n'ahịa ahụ, ga-akwado ya ụdị nke asaa nke usoro ihe ntanetị aka.
Dabere na onye isi njikwa Redmi Lu Weibing, a na-enye usoro ịmeghe mkpịsị aka Redmi K20 na a 3P Lens Type Optical Mkpisiaka nyocha. Enwere ike ikwu na etinyere obere igwefoto igwe n'okpuru ekwentị.
Akụrụngwa nkwalite na-abịa n'ụdị pixels 7.2-micron buru ibu, nke bu 100% kariri mpaghara photosensitive nke usoro bu uzo. Mpaghara nyocha nyocha mkpisi-aka amụbawo site na 15% na ụdị nke usoro nke asaa.
Banyere atụmanya, Redo's K20 duo nwere ike ibute ihuenyo AMOLED nke 6.39 nke anụ ọhịa ga-akwado mkpebi FullHD +. A na-atụ anya ka ekwentị abụọ ahụ nwee ụdị nkọwa dịka batrị 4,000 mAh na igwefoto mgbapụta megapixel 20.
Redmi K20 nwere ike kwadoro ya Snapdragon 730mgbe el Snapdragon 855 nwere ike ịnọ n'okpuru mkpuchi nke Redmi K20 Pro. N'aka nke ya, ụlọ ọrụ ahụ ekwenyela nke ahụ K20 ga - egosipụta ihe mmetụta igwefoto igwefoto Sony IMX586 nke 48 MP yana nkwado maka 960fps ngwa ngwa ngagharị vidiyo. N'aka nke ya, Redmi K20 duo ga-abia na 8 GB nke RAM na ihe ruru 256 GB nke nchekwa ala. Agbanyeghị, ọnụahịa ha dị ugbu a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Redmi K20 ga-abata na ọgbọ nke asaa nwere ihe nrịba ama mkpịsị aka